Arsenal Oo Guul Dahabi Ah Ka Soo Gaadhay AC Milan +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Arsenal Oo Guul Dahabi Ah Ka Soo Gaadhay AC Milan +SAWIRRO
Arsenal ayaa guul dahabi ah ka soo gaadhay AC Milan oo ay San Siro marti ugu ahayd waxayna Gunners ugu danbayn ka baxday xaaladii murugada badnayd ee ay ku soo jirtay kulamadii ugu danbeeyay. Mkhitaryan iyo Aaron Ramsey ayaa Milan qaybtii hore min hal gool ka dhaliyay si ay kooxdooda Gunners u dhigaan xaalad ay si buuxda ciyaarta ugu maamuli karaan.
Arsenal oo walwal xoogan ka qabtay kulanka Milan ayaa 2-0 guul ah ku soo gaadhay ka hor inta ayna Emirates Stadium ku soo dhawwayn AC Milan. Kooxda ree Talyaani ayaa ku fashilantay in ay ka faa’iidaysato jamaahiirta kooxdeeda iyo garoonkeeda waxayna London iskeeni doontaa iyada oo ah kooxda uu culayska ugu wayni saaran yahay.
Arsenal ayaa kulankan iskeentay iyada oo afar guuldaro oo xidhiidh ahi soo gaadheen isla markaana quus ka taagan in ay kaalinta afraad ee Premie League ku soo bixi karto, sidaa daraadeed, rajada kaliya ee Arsene Wenger iyo kooxdiisa u nool ayaa ahayd in ay natiijo fiican ku soo gaadhaan San Siro si ay ugu soo bixi karaan siddeed dhamaadka Europa League oo noqon kara dariiq ay ugu soo bixi karaan UEFA Champions League.
AC Milan oo xaalad fiican ku soo jirtay ayaa doonaysay in ay xalaada xun ee Gunners ka faa’iidaysato laakiin qaybtii hore ee kulankan waxaa soo baxday koox gabi ahaanba ka duwan Arsenal-shii musiibada ku soo jirtay sanadkan 2018 waxayna dhibaato badan ku abuurtay Milan oo u muuqatay mid ay ka baahday qaybtii hore ee ciyaartan.
AC Milan ayaa markiiba u muuqatay mid dar dar xoogan ku bilaabtay waxayna cadaadis ku abuurtay Arsenal iyada oo koornayaal deg deg ah heshay laakiin Gunners ayaa iska caabin fiican samaysay ka hor intii ayna garoonka cagta si fiican ula helin.
DAQIIQADII 15 aad Arsenal ayaa heshay gool muhiimad khaas ah kooxdeeda u lahaa isla markaana ay xalaad adag ugu abuurtay kooxda martida loo ahaa ee AC Milan waxaana goolkan u saxiixay Mkhitaryan oo lagu xusuusto qaabkii uu xili ciyaareedkii hore Man United uga soo caawiyay in ay Europa League ku soo guulaysatay, wuxuuna Mkhitaryan goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Mesut Ozil waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Gunners hogaanka kula wareegtay.
Haddii AC Milan bilawgii ciyaartaba laga filayay in ay goolka furitaanka ku hormarayso waxaa taas beeniyay Mkhitaryan oo dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Arsenal. Alla maxay ahayd waqti muhiim ah oo goolkiisii ugu horeeyay ee Gunners uu sare ugu qaaday kooxdiisa!.
DAQIIQADII 45+4 Arsenal ayaa si layaableh ula timid goolkeeda labaad ee ay wadnaha ku jartay kooxda martida loo ahaa ee AC Milan waxaana markale si cajiib ah goolkan u dhaliyay Aaron Ramsey oo kubbad caawin ka helay Mesut Ozil oo markan si buuxda u kala dhantaalay difaaca Milan wuxuuna isku saaray Ramsey iyo goolhaye Donnarumma wuxuuna Ramsey dhulka dhiga isla markaana uu goolka oo banaan ku baxay Donnarumma isaga oo ciyaarta ka dhigay 2-0 ay Arsenal hogaanka ku dheeraysatay.
Qaybtii hore ee ciyaarta Milan ayaa ku fashilantay in ay hal bartilmaameed oo goolka Arsenal ah ay samayso halka Arsenal ay afar jeer si toos ah u toogatay goolka Milan waxayna laba jeer dhaafeen goolhaye Donnarumma waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 2-0 Milan hogaanka looga hayay iyada oo garoonkeeda joogta.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Milan soo laabtay iyada oo si xoogan u raadinaysay qaabkii ay shabaqa Gunners ku gaadhi lahayd laakiin kooxda Arsene Wenger oo qaybtii hore ee kulankan kalsooni baan ku heshay goolashii ay dhalisay ayaa goolka saddexaad raadinasyay halka ay difaacasho ku celinaysay Milan.
DAQIIQADII 52 AAD Milan ayaa heshay fursad wayn oo gool dhalineed laakiin darbaadii uu Bonaventura goolkan ku dhalin kari lahaa ayaa noqotay mid liidata oo birta goolka dul martay.
AC Milan ayaa wax walba oo ay awoodi kartay u samaysay sidii ay ugu horayn ula iman lahayd goolka kowaad laakiin Arsenal oo ogayd in waxaan guul ahayn ay xaaladeeda xun sii wadi karto ayaa dadaal adag u samaysay in ay Milan fursad walba ka beeniso iyada oo David Ospina uu door wayn ka ciyaarayay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay Arsenal guul dahabi ah isla markaana muhiimad khaas ah u leh xili ciyaareedka kooxdeeda ay ku soo gaadhay waxayna Milan ku soo abuurtay rajo xumo iyada oo kulanka lugta labaad ee Emirates Stadium uu noqon doono mid shaqo wayn ay Milan u baahan doonto.